Jaap Stam oo kala taliyay Matthijs de Ligt arrimo ku saabsan mustaqbalkiisa Juventus – Gool FM
Jaap Stam oo kala taliyay Matthijs de Ligt arrimo ku saabsan mustaqbalkiisa Juventus
Dajiye April 18, 2020
(Turin) 18 Abril 2020. Halyeeyga reer Holland iyo kooxaha Manchester United iyo AC Milan ee Jaap Stam ayaa aaminsan in Matthijs de Ligt uu sii joogi doono naadiga Juventus sanado badan.
Inkastoo ay jiraan dhibaatooyin uu Matthijs de Ligt la kulmay bilooyinkii ugu hooreeyay ee waayihiisa kooxda Juventus, iyadoo ay sidoo kale jiraan warar la xiriirinaya kooxaha Barcelona, ​​Real Madrid iyo Manchester United, ayuu haddana Jaap Stam u arkaa in Juventus ay tahay meesha ku haboon isaga.
Matthijs de Ligt ayaa xagaagii lasoo dhaafay ku yimid kooxda kubadda cagta ee Juventus qiimo dhan 85 milyan oo euro, kaddib bandhig cajiib ah uu ka soo sameeyay kooxda Ajax.
Haddaba halyeeyga reer Holland iyo kooxaha Manchester United iyo AC Milan ee Jaap Stam ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u malaynayaa in bilihiisii ugu horreeyay ee talyaaniga ay u aheyd wax wanaagsan, wuxuu la kulmay dhaleeceyn, laakiin waxay u baahan tahay waqti si loo fahmo jawiga iyo laqabsashada qaabka kala duwan ee kubadda cagta”.
“Wali waa da’ayar, wuxuu joogaa koox weyn, waxaana jira cadaadis badan, wuxuuna wajahayaa, kooxo in badan ka sarreeya kuwa ku sugan Holland”.
“Juventus waxay ku bixisay lacag aad u badan si ay u iibsato, waxaan u maleynayaa in qaab ciyaareedkiisa ilaa iyo hadda uu aad u fiican yahay, khibraddani waxay isaga ka dhigaysaa inuu naftiisa ku kalsoonaado, wuxuu u baahan yahay oo keliya inuu barto luqadda talyaaniga si uu si wanaagsan ula xiriiro asxaabtiisii.”
“Waxaan u maleynayaa inay lagama maarmaan tahay in Matthijs de Ligt uu la sii joogo Juventus sanado badan… maxaa yeelay tani waa wadada kaliya ee isaga uu ku horumari karo, isagoo wax ka baranaya cadaadiska laga filayo tartanka Champions League iyo horyaalka Talyaaniga”.
Haddii uu ka tago Lautaro Martinez waa kuma xiddiga ay saxiixiisa isku dayi doonto Inter Milan ee ka tirsan Man United?
David Beckham oo si cajiib ah kaga hadlay isbar-bardhiga xiddigaha Messi iyo Ronaldo